Tantaran'i Borondy - Wikipedia
Ny tantaran'i Borondy dia tantaran' ny firenena izay iray amin' ireo vitsy ao Afrika, miaraka amin' i Roanda sy i Botsoana sy i Lezôtô ary i Esoatiny, izay fitohizan'ny tanin'y fanjakana afrikana nisy tamin'ny vanimpotoana talohan'ny fanjanahan-tany.
1.1 Talohan'ny fanjanahan-tany
2 Taorian' ny fanjanahan-tany: fanjakà-mpanjaka avy eo repoblika
2.2 Fijoroan'ny Repoblika
3 Firosoana amin'ny demôkrasia sy ny ady an-trano
3.1 Fahasahiranan'ny firosoana ho amin'ny demôkrasia
3.2 Ady an-trano nampisy ra mandriaka
3.3 Fihanak'ilay ady an-trano amin'ny firenena manodidina
4 Ny tetezamita sy ny famerenana ny fandriam-pahalemana
4.1 Ezaka fandaminana nataon'i Nelson Mandela
4.2 Fananganana governemanta tetezamita
4.3 Lalàmpanorenana sy fifidianana demôkratika kokoa
5 Fahasahiranana nandritra ireo taona 2010
5.1 Nanjaka tamin'ny fifidianana kaominaly ny CNDD-FDD
5.2 Fifidianana tsy neken'ny mpanohitra
5.3 Nandimby i Pierre Évariste Ndayishimiye
Talohan'ny fahaleovan-tena[hanova | hanova ny fango]
Mpiantafiky ny mpanjaka Kasliwami tao Orondy teo anelanelan'ny taona 1906 sy 1918.
Nahitana ny asan-tanan'ny olona nonina tao izay tokony tany amin’ny 10 000 taona lasa any ho any ny teo amoron’ny farihy Tanganyika. Hita koa fa ny Pigmea (izay angamba razamben'ireo Toà) dia efa niorim-ponenana tao amin'ny faritra misy an'i Borondy tamin’ny fahatongavan’ny mpamboly (izay mety ho Banto) tamin’ny taonarivo voalohany, izay mifanandrify amin'ny sisa navelan'ny taovy tamin’izany fotoana izany.
Ireo Totsy mpiadry andiam-biby fiompy dia nanorim-ponenana tao amin’io faritra io tamin’ny taonjato faha-15 ka nametraka fitondrana tompomenakely (mifototra amin'ny fananana tany) izay nanjakany ara-pôlitika tamin’ny Hoto. Nametraka ny lamina misy sarangam-poko sy mpialokaloka mifototra amin’ny fananana biby fiompy koa izy ireo. Izany fiarahamonina anjakan’ny tompomenakely izany dia notarihin’ny mpanjaka (atao hoe mwami), nefa ny rafitra ara-pôlitika sy ara-piarahamonina dia nalefaka kokoa noho ny tao Roanda (izay nahitana ny fizaràn'ny mponina ho Totsy sy Hoto ary Toà koa). Tsy nanana fahefana tsy refesi-mandidy ny mpanjaka ary ireo fokon'ny mpajaka izay nisy betsaka tao (atao hoe ganwa) dia samy nampiasa tetika hahafaha-mandray anjara amin’ny fifehezana ny fahefana ara-pôlitika. Mateti-pitranga kokoa noho ny tao Roanda ny fifanambadian’ny Totsy sy ny Hoto. Nanana fahaleovan-tena ara-toekarena bebe kokoa ny Hoto tao Borondy raha ampitahaina amin'izay niseho tao Roanda. Noho ny fisian'i Tanganyika sy ny fahakaikin'ny lalam-ben’i Afrika Afovoany mankany Zanzibar dia nandray hevi-baovao kokoa avy any ivelany i Borondy raha mitaha amin’i Roanda.
Nozanahin'ny Alemàna i Borondy tamin’ireo taona 1880 ka nantsoina hoe Orondy (Urundi), avy eo nakambana tao amin’i Afrika Atsinanana Alemàna, niaraka tamin’i Roanda (izay nantsoin’ny Alemàna hoe Ruanda). Nalain’ny tafika belza avy ao Kôngô, izay nampian’ny Britanika, i Roanda sy i Orondy tamin’ny Ady Lehibe Voalohany, izay namorona ny fari-tanin’i Roanda-Orondy (Ruanda-Urundi) ka i Usumbura (izay lasa Bujumbura ankehitriny) no natao renivohitra. Tamin’ny taona 1923 dia nankinin’ny Fikambanan’ny Firenena ho tantanan’i Belzika i Roanda-Orondy, fa taorian’ny Ady Lehibe Faharoa kosa dia napetraky ny Firenena Mikambana eo ambany fiahiana belzia. Tamin’ny taona 1925 dia nametraka fitondrana atao hoe indirect rule ("fanapahana tsy mivantana") izay nanome tombon-dahiny ny Totsy saranga ambony ny mpanjana-tany belza. Napetraka ho ara-dalàna ny fisarahan’ny Totsy sy ny Hoto ka ny fiaviana ara-poko dia lasa singa maha izy ny tsirairay teo anatrehan’ny fanjakana.
Taorian' ny fanjanahan-tany: fanjakà-mpanjaka avy eo repoblika[hanova | hanova ny fango]
Fanjakà-mpanjaka[hanova | hanova ny fango]
Tamin’ny 1 Jolay 1962 dia nahazo fahaleovan-tena i Borondy, nisafidy ny fitondrà-mpanjaka fehezin-dalàmpanorenana, ary tonga isan’ ny Firenena Mikambana izy. Izany fahaleovan-tena izany dia nifanojo amin-toe-javatra ratsy satria nisy namono i Louis Rwagasore andrian-dahy mpandova izay nanindrahindra ny fandraisana anjaran’ny foko rehetra amin’ny fitondrana. Taorian’izay dia nisy namono koa ny piraiminisitra hoto Pierre Ngendandumwe. Nanomboka tamin’izay ny tsy fahamarinan-toeran’ny pôlitika tao Borondy izay nisehoana fanonganam-panjakana mifanesy nataon’ireo miaramila totsy sy ny fikomian’ny Hoto izay narakarahin’ny fandringanana ireo mpikomy ireo (tamin’ny taona 1965, 1962, 1988 ary1992). Ny revôlisiona nataon’ny Hoto tao Roanda ao akaiky, izay nanoherana ny fitondrana tompomenakely totsy, dia nanosika ny Hoto ao Borondy hitaky ny fizaràna ny fahefana ara-pôlitika.
Fijoroan'ny Repoblika[hanova | hanova ny fango]
Tamin’ny volana Jolay 1966 dia naongan’ny miaramila ny mpanjaka Mwambutsa IV, nosoloana an’i Ntare V zanany izay tia fandrosoana. Efa-bolana taorian’izay dia nanambara ny fijoroan’ny repoblika ny kapiteny Michel Micombero sady nandray ny fitondrana ary notendrena ho filoham-pirenena. Tamin’ny volana Novambra 1976 dia nisy nanongana i Micombero ka ny jeneraly Jean-Baptiste Bagaza no nandray ny fahefana. Tsy marin-toerana ny filaminana teo amin’ny Totsy ao amin’ny fitondrana sy ny Hoto maro an’isa sady noforonina tamin’ny taona 1981 ny lalàm-panorenan’ny antoko tokana. Lany tamin’ny fifidianana izay tsy nahitana mpirotsaka afa-tsy ny tenany i Bagaza tamin’ny taona 1984, nefa nisy nanongana koa tamin’ny taona 1987, ka nasolo azy i Pierre Buyoya, lehiben’ny Comité militaire de salut national. Naneho ny finiavany hametraka lamina manaja ny fitovian-jon’ireo fianakaviambe totsy sy hoto ny mpitodra vaovao, ka nanao izay hanafahana ny gadra pôlitika. Na dia izany aza dia nisy ny famonoana Hoto marobe izay nampisy ra mandriaka tao Borondy tamin’ny taona 1988.
Firosoana amin'ny demôkrasia sy ny ady an-trano[hanova | hanova ny fango]
Fahasahiranan'ny firosoana ho amin'ny demôkrasia[hanova | hanova ny fango]
Nolanina tamin’ny alalan’ny fitsapan-kevi-bahoaka ny lalàmpanorenana vaovao tamin’ny volana Marsa 1992. Tamin’ny volana Jona 1993 dia nanao izay hahatanterahan’ny fifidianana demôkratika ny filoham-pirenena Buyoya izay nahalany an’i Melchior Ndadaye teo amin’ny fitondrana tamin’ny vato 64%. Hoto I Melchior Ndadaye sady mpikambana ao amin’ny Front pour la démocratie au Burundi (Frodebu). Novonoin’ny miaramila totsy anefa izy iray volana taorian’io ka niteraka herisetra mifanesy izay nahafatesana olona miisa 50 000 any ho any, sady nahatonga ny fandosiran’ny Hoto miisa eo amin’ny 70 000 nankany Tanzania sy tany Roanda.
Nandimby an’i Ndadaye i Cyprien Ntaryamira ary niezaka ny hahatapitra ny famaizan izay nataon’ny miaramila nanjakan’ny Totsy. Maty niaraka tamin’i Juvénal Habyarimana filohan’i Roanda izy tamin’ny nitifirana misily ny fiaramaidina nitondra azy ireo, taloha kelin’ny fotoana tokony hipetrahan’ny fiaramanidina teo amin’ny seranan’i Kigali ao Roanda tamin’ny 6 Avrily 1994.
Ady an-trano nampisy ra mandriaka[hanova | hanova ny fango]
Nisahana ny andraikitry ny filoham-pirenena i Sylvestre Ntibantunganya, filohan’ny Antenimieram-pirenena teo aloha, nefa fahefana sarintsariny no nananany. Nandritra izany fotoana izany dia nandriaka ny ra tao Roanda tamin’ny fandringanana ny Totsy sy ny Hoto mpandanjalanja, ka natahorana ny hihanaka mankany Borondy izany. Hatramin’izany fotoana izany ny ady an-trano, izay tsy nanam-pitsaharana hatramin’ny nahazoana ny fahaleovan-tena, dia nitombo hatrany.
Tamin’ny volana Marsa 1996 dia nilaza ny mpitondra teny manokan’ny Firenena Mikambana izay nisahana ny fanaovana fanadihadiana momba ny toe-draharaha tao Borondy fa 15 000 any ho any ny isan’ny olona maty tamin’ny taona 1995, ka ny ankamaroan’izany dia olo-manga hoto (mpampianatra, mpitsabo, sns). Ny fikambanana Amnesty International koa dia nanameloka ny fomba nampiantranoana ireo mpitsoa-ponenana hoto roandey miisa 70 000 tao amin’ny tobin’ny mpitsoa-ponenana tao Borondy. Araka ny Amnesty International dia mpitsoa-ponenana miisa 1 500 isam-bolana no novonoin’ny hery fiarovana borondey (Forces de sécurité burundaises) na ny milisy totsy. Tamin’ny volana Jolay 1992 dia nandray ny fahefana i Pierre Buyoya, filoha taloha, ary nandroaka an’i Ntibantunganya, filoha hoto.
Nanao ankivy ara-toekarena an’i Borondy ny firenene afrikana manodidina sy ny fianakaviambe iraisam-pirenena. Nandritra izany fotoana izany dia niely tamin’ny faritra maro tao Borondy ny fikomiana hoto. Izany ankivy izany dia namely indrindra ny mponina mahantra indrindra sady nampanan-karena ireo izay efa nanan-karena, ka voatery natsahatra ilay ankivy tamin’ny volana Janoary 1999. Nandritra izany fotoana izany dia navondrona ho amin’ny tanàna madinika maro ny mponina hoto.
Fihanak'ilay ady an-trano amin'ny firenena manodidina[hanova | hanova ny fango]
Nisy fiantraikany mivantana tamin’ny ady an-trano tao Borondy ny ady nampisy ra mandriaka tao Roanda sy tao Kôngô satria nitovy tamin’ny nahazo ireo tao amin’ireto firenena mpifanila vodirindrina ireto ny zava-manjo ny Hoto mpitsoa-ponenana tao Borondy ka samy nanohana ny fikomiany avy, toraka izany koa ireo mpioko tao Oganda. Tamin’ny taona 1997 dia nahazo ny mpitsoa-ponenana borondey koa ny fandripahana ireo Hoto mpitsoa-ponenana miisa manodidina ny 300 000 notanterahin’ny tafika roandey (nandraisan'i Paul Kagame anjara) nifanampy tamin’i Laurent-Désiré Kabila. Maro koa ny mpitsoa-ponenana tao Tanzania ka niteraka tsy fifanarahana teo amin’ny firenena roa tonta izany.
Tao anatin’ny efatra taona dia nahafaty olona miisa 250 000 ny ady an-trano tao Borondy, raha nisy 800 000 ny Hoto natao sesitany sy nafatratry ny tafika tanatin’ny toby tamin’ny fomba tsy mendrika ny maha olombelona.
Ny tetezamita sy ny famerenana ny fandriam-pahalemana[hanova | hanova ny fango]
Ezaka fandaminana nataon'i Nelson Mandela[hanova | hanova ny fango]
Ny fifampiraharahana rehetra natao tamin’ny volana Jona 1998 tao Arusha any Tanzania, nelanelanin’i Julius Nyerere filoha tanzaniana teo aloha, dia niezahana namolavolana programa ankapobeny ho an’ny governemanta tetezamita izay nandraisan’ireo mpifanandrina anjara, nefa tsy nandresy lahatra azy ireo tanteraka. I Nelson Mandela izay mpanelanelana tamin’izany dia natoky ny filoha Buyoya amin’ny famahana ny olana satria nankasitraka ny tokony hampiharana ny fitsipika "olona iray vato iray" amin’ny fanapahan-kevitra. Zava-dehibe tamin’ny Hoto, izay maro an’isa, ny fizaràna ny fahefana, nefa ny fananana fahefana amin’ny tafika dia iakinan-javatra lehibe ho an’ny Totsy izay vitsy an’isa.
Tamin’ny volana Aogositra 2000 dia nisy ny fifanarahana momba ny fandriam-pahalemana sy momba ny fampihavanana teo amin’ny fitondrana sy ny mpanohitra izay nosoniavina tao Arusha any Tanzania vokatry ny fanelanelanana nataon’i Nelson Mandela. Izany fifanarahana izany dia naneken’ny mpandray anjara ny fizaràna ny fahefana eo amin’ny Totsy sy ny Hoto mba hahafahana mamerina ny fandriam-pahalemana sy ny demôkrasia amin’ny fiafaran’ny tetezamita telo taona. Notapahina tamin’izany koa ny fandefasana miaramila avy ao Afrika Atsimo miisa 700 izay hiandraikitra ny fiarovana ireo mpanao pôlitika sy fitandroana ny filaminana.
Tsy nampitsahatra ny ady an-trano anefa izany. Nihantona ny fanampiana iraisam-pirenena tamin’ny famerenana ny fandriam-pahalemana, ary nitontongana izaitsizy ny toekarena ary nihenjana hatrany ny fisaraham-bazan'ny tafika teo am-pelan-tanan’ny Totsy, ka niteraka ny fanonganam-panjakana nandamoka tamin’ny volana Avrily 2001, notanterahin’ireo tanora manam-boninahitra miaramila izay nikasa hanongana ny filoham-pirenena Buyoya.
Fananganana governemanta tetezamita[hanova | hanova ny fango]
Na dia nitohy aza ny ady teo amin’ny Totsy sy ireo Hoto henjam-pihetsika dia natsangana ny governemanta tetezamita tamin’ny volana Novambra 2001 araka ilay fifanarahana natao tao Arusha. Nozaraina ara-drariny tamin’ny Hoto maro an’isa sy ny Totsy vitsy an’isa ny fahefana tao amin’izany governemantan’ny fampiraisam-pirenena izany. Nanohy niantsoroka ny andraikitra napetraka aminy ny filoha Pierre Buyoya (Totsy) nandritra ny valo ambin’ny folo volana fa i Domitien Ndayizeye kosa, izay sekretera jeneralin’ny antokon’ny Hoto (ny Front pour la démocratie au Burundi na Frodebu) dia lasa filoha lefitra. Raha nitohy ihany ny ady ary tsy tafavoaka ny fifampiraharahana hoan’ny fandriam-pahalemana, ny tetezalita dia nitohy tamin’ny volana Avrily 2003 sady nanatanteraka ny famindram-pahefana araka ny fifanarahana tao Arusha toy izao: niala ny filoha Pierre Buyoya ka nosoloan’ny filoha lefitra Domitien Ndayizeye tamin’ny dingana faharoan’ny tetezamita izay maharitra valo ambin’ny folo volana. Ilay Totsy atao hoe Alphonse-Marie Kadégé no natao filoha lefitra.
Ny fifampiraharahana momba ny fandriam-pahalemana izay nanaovan’ i Afrika Atsimo fanelanelanana dia niafara tamin’ ny fanaovana sonia fifanaraham-pandriam-pahalemana ankapobeny, ara-pôlitika sy ara-miaramila, tamin’ ny 16 Novambra 2003, teo amin’ ny governemanta borondey sy ny fikambanana mpioko hoto (ny Forces pour la défense de la démocratie - FDD) tarihin’ i Pierre Nkurunziza. Io fifanarahana io dia nitsinjovana ny fidiran’ ny FDD ao amin’ ny governemanta. Ny fanatanterahana izany dia niaraka tamin’ ny famoronana ny Opération des Nations unies au Burundi (ONUB) tamin’ny volana Mey 2004 hisahana ny fanohanana ny firosoana mankany amin’ny fandriam-pahalemana sy ny fampihavanam-pirenena.
Dingana lehibe nandritra ny tetezamita koa ny fanaovan-tsonia ny fifanarahana momba ny fizaràna ny fahefana eo amin’ny Hoto sy ny Totsy tamin’ ny volana Aogositra 2004. Izany fifanarahana izany dia nanomana ny fitsinjarana toerana mifandanja eo amin’ireo foko lehibe roa ao Borondy any amin’ireo andrim-panjakana hoavy. Tamin’io volana io ihany anefa dia niseho ny fandripahana tao amin’ny tobin’ny mpitsoa-ponenana ao Gatumba taorian’ny fifanandrinana tamin’ny Repoblika Demôkratikan'i Kôngô. Nahafatesana mpitsoa-ponenana kôngôley totsy miisa 159 (ireo atao hoe Baniamolenge, Banyamulenge) izany noho ny nafitsoky ny Forces nationales de libération (FNL), izay fikambanana hoto borondey mpioko sisa farany nanohy ny ady, indrindra tao Bujumbura.
Lalàmpanorenana sy fifidianana demôkratika kokoa[hanova | hanova ny fango]
Ny firosoana amin’ny fandriam-pahalemana sy mankany amin’ny demôkrasia dia tanteraka tamin’ny taona 2005 tamin’ny alalan’ny fankatoavanana lalàm-panorenana vaovao izay nohamafisina tamin’ny fitsapan-kevi-bahoaka tamin’ny volana Feboary 2005. Voalaza ao ao amin’izany lalàm-panorenana izany ny fitsinjarana tsy mitanila ny fahefana eo amin’ny Hoto sy ny Totsy. Fahatanterahan’izany koa ny fanaovana fifidianana ny mpitantana ny kaominina sy ny mpikambana ao amin’ny Antenimieram-pirenena sy amin’ny Antenimieran-doholona, izay notanterahina tao anaty filaminana teo ambany fanaraha-mason’ny ONUB, na dia teo aza ny fanafihana sy ny fanakorontanana nataon’ny FNL tsy hahavanona izany. Tamin’ny 19 Aogositra 2005 dia lany ho filoham-pirenena i Pierre Nkurunziza izay mpitarika ny vondron’ny mpioko hoto taloha (ny FDD).
Fahasahiranana nandritra ireo taona 2010[hanova | hanova ny fango]
Nanjaka tamin'ny fifidianana kaominaly ny CNDD-FDD[hanova | hanova ny fango]
Dimy taona taty aoriana dia nihanibirioka ny fitondrana ka niteraka tsy hafaliana teo amin'ny Hoto sasany. Nahazo ny 2/3 n'ny toerana teo amin'ny fitantanana kaominina ny Conseil national pour la défense de la démocratie-Forces de défense de la démocratie (CNDD-FDD) izay notarihi'i Pierre Nkurunziza tamin'ny 26 Mey 2010. Niampanga azy ireo ho nanao hosoka goavana tamin'ny fifidianana ireo antoko hoto nanao sonia tany Arusha. Tsy nitovy hevitra amin'izy ireo ny Firenena Mikambana sy ny Vondrona Eorôpeana. Nisy noho izany ny savorovoro tao Bujumbura. Betsaka ny naratra. Nisy ny fisamborana ireo lohandohan'ny Hoto. Nihaona tamin'ny fiolohan'ny Repoblika ny sekretera jeneralin'ny Firenena Mikambana, i Ban Ki-moon, tsy nahafaly ny mpanohitra izany fihainoana feon-dakolosy tokana izany.
Fifidianana tsy neken'ny mpanohitra[hanova | hanova ny fango]
Nanao izay hisakanana ny fifidianana filoham-pirenena izay tokony hatao amin'ny 28 Jona 2010 ireo antokon'ny Hoto. Nanampy ny mpitokona ny filoha teo aloha Domitien Ndayizeye tamin'ny 5 Jona 2010. Nisy ny fanentanana ny olona tsy hifidy, izay noraran'ny governemanta mafy. Maro ireo mpanohitra nosamborina ka nogadraina. Tanteraka ihany ny fifidianana filoham-pirenena na dia tsy nandray anjara aza ny mpanohitra, ka lany tamin'ny 91 % i Pierre Nkurunziza izay kandidà tokana.
Tamin'ny taona 2015 dia nanao izay hahafahany milatsaka sy hahalany azy fanintelony i Pierre Nkurunziza tamin'ny fifidianana izay kasaina hatao tamin'ny 26 Jona 2015. Tsy araka ny lalàm-panorenana anefa izany nefa neken'ny Fitsarana avo momba ny lalàm-panorenana (Cour constitutionnelle). Tamin'ny 13 Mey 2015 dia saika voaongan'ny jeneraly Godefroid Niyombare ny filoha Pierre Nkurunziza raha teny am-pandehanana. Nitolo-batana ireo mpanongam-panjakana rehefa tsy nahomby taorian'ny ady mangotraka tao Bujumbura. Maro ny mpanohitra tratran'ny famaizana nahalatsahan-dra taorian'izay ary an-jatony maro ny maty. Ana hetsiny maro ireo Borondey nitsoa-ponenana nankany ivelany. Nahemotra imbetsaka ny fifidianana ka nateraka ihany tamin'ny 21 Jolay 2015, ka nandresen'i Pierre Nkurunziza tamin'ny 69,41 %, na dia hitan'ny mpanaramaso maro fa najakan'ny hosoka sy ny hala-bato izany fifidianana izany.
Nandimby i Pierre Évariste Ndayishimiye[hanova | hanova ny fango]
Ny jeneraly Évariste Ndayishimiye no voatendrin'ny antokon'i Pierre Nkurunziza handimby azy ho kandidà amin'ny fifidianana filohan'ny Repoblika izay natao tamin'ny 20 Mey 2020. Lany tamin'ny vato 68,72 izy. Nahazo 24,19 % ny iray amin'ireo kandidàn'ny mpanohitra, i Agathon Rwasa, izay filohan'ny Conseil national pour la liberté (CNL).
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Tantaran%27i_Borondy&oldid=1012432"
Voaova farany tamin'ny 19 Jiona 2021 amin'ny 13:48 ity pejy ity.